စာရေးကြသည်ဟု ဆိုရာဝယ်.. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Opinions & Discussion » စာရေးကြသည်ဟု ဆိုရာဝယ်..
Posted by စဆရ ကြီး on Jan 14, 2012 in Opinions & Discussion | 21 comments
အစရှိသည်ဖြင့် အကြောင်းအရာအမျိုးမျိုး၊ ရည်ရွယ်ချက်အမျိုးမျိုးဖြင့် ရေးသားကြခြင်းဖြစ်သည်။
တစ်ချို့မှာမူကား ရင်ဘတ်ဖြင့် ရေးသားကြခြင်းဖြစ်သည်။ ယခုရေးသားနေသော ဆိုက်မှ ထင်ရှားသူများဆိုလျင် မမှီ၊ သော်ဇင်(လွိုင်ကော်)၊ အလင်းဆက်၊ Pooch၊ သူရဿဝါ တို့ဖြစ်ကြသည်။ သူတို့မှာကား ကိုယ်ခံစားမိသမျှများကို ခံစားမိသည့်အချိန်တွင် ခံစားမိသလိုရေးခြင်းဖြစ်သည့်အတွက် အတော်လေးပင် စာရေးကျဲကြလေသည်။ တော်ရုံတန်ရုံနှင့် စာတစ်ပုဒ် ဖြစ်မလာပေ။ ပုံမှန်ဝင်ဖတ်သူမှသာ သူတို့သည် ခံစားချက်ရေးသူများဖြစ်ကြောင်း သိကြပေမည်။ ယခုလို တစ်ရက်အပုဒ် (၂၀)ခန့်တက်သည့်အချိန်တွင်မူ သူတို့ခံစားချက်စာစုများသည်ကား တော်ရုံလူ ဖတ်နိုင်ခြင်းမရှိပေ။ ဘယ်သူ့ ဘယ်သူကမှလဲ ထင်ပေါ်လို့ စင်တော်ကောက်ခြင်းလဲမပြု၊ မူဝါဒနှင့် မညီလေသလောမသိ။
ပြင်ပလောကတွင်မူကား အမျိုးသားစာပေဆုရ စာရေးဆရာသည်ကား လွန်စွာ ဂုဏ်ယူစရာကောင်းလှသည်။ ယခုဆိုက်တွင်မူကား သူကြီးရွေးချယ်ခြင်းခံရသောသူအဖို့ အလိုလိုနေရင်း နာမည်ကြီးကြရတော့သည်။ သူတို့၏ ရေးသားတင်ပြပုံကောင်းမွန်ခြင်းကြောင့်လဲ ဖြစ်သည်။
သို့ပါသော်ငြား… သူတို့သည်ကား ရင်ဘတ်နှင့် ခံစားရေးသူများသာဖြစ်သောကြောင့် စာတစ်ပုဒ်၊ ၀ါကျတစ်ကြောင်းဖြစ်လာရန် အတော်ခဲယဉ်းလေ၏။ သူတို့၏ ရင်ဖွင့်သံများအား ၀င်မန့်သူ အနည်းငယ်သာ အသိအမှတ်ပြုခြင်းခံရသည်။ အုပ်ချုပ်သူလူတန်းစားမှာကား နေနိုင်လွန်းလှခြိမ့်။ စာရေးသည်ဆိုရာဝယ် မိမိအား အနည်းငယ်အသိအမှတ်ပြုခံရလျင်ပင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို စာရေးဆရာ ဖြစ်ပြီအလား ထင်မှတ်မှားကြ၏။ ရွေးချယ်ဖော်ပြခြင်းခံရလျင်တော့ ကိုယ့်ကလောင်အမည်ကို နည်းနည်းမှပင် မပြောင်းလိုတော့ပေ။
ရင်ဘတ်ဖြင့် ရေးသူများသည်ကား အမှန်တစ်ကယ်တော့ ရင်ရှင်းခြင်းသက်သက်သာ ဖြစ်သည်ဟုလည်း ပြောလို့ရနိုင်သည်။ ရှိသမျှကို တစ်ခါရှင်းထုတ်လိုက်ပြီးနောက် နောက်ထပ်ပြည့်လာရန်စောင့်ရသဖြင့် ကြားကာလသည်ကား မှန်းဆရ ခက်လှသည်။ စာတစ်ပုဒ်ရေးပြီးသည်နှင့် နောက်တစ်ပုဒ်ရေးနိုင်ရန် ခွန်အားများမွေးရသည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အားရှိအောင် မွေးမြူရသည်။ သို့မှသာ စာများရေးသားနေချိန်တွင် ရေးရင်းနှင့် အားမကုန်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ကျွန်တော်သည်ကား အားကုန်နေပါသေးသည်။ ရှိသမျှ လက်ကျန်လေး အကုန်ထုတ်သုံးပြီးနောက် အားပြတ်နေသလိုလို ဖြစ်နေပါသည်။
ထို့အတွက်ကြောင့် စာတွေတော့ ရေးနိုင်ဦးမည်မထင်၊ ခံစားချက်တွေသာ စုဖြစ်နေတော့၏။
ဆိုပြီး စာလဲဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ် ကဗျာလဲဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ် ရေးကြတာဆိုတော့ ခံစားချက်တခုထဲနဲ့တော့
အပေါ်ကလေးမျိုးစလုံးမှာလဲ စာရေးသူရဲ့ စေတနာ ဟာ ပါနေတတ်ပါတယ်။
(ဂရုဏာအစရှိသဖြင့်)ဖြစ်ပေါ်စေလို့ စာကောင်းထဲ ထဲ့ရမှာပါဘဲ။
ကျနော်တို့သူများတွေဖတ်ဖို့ရေးတယ်ဆိုတဲ့စေတနာက “စ” ရှိနေပါပြီ။
စာအရေးအသားမကောင်းရင် (သို့)ကိုယ့်အကြိုက်နဲ့မကိုက်တော့လဲ ပရိတ်သတ်မဖတ်ဖူးဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပေါ့။
သူကြီးရဲ့ရွေးချယ်မှုဆိုတာကလဲ ကျနော့အမြင်တော့ သူက အများဖတ်စေချင်လို့ရွေးလိုက်တယ်လို့မြင်ပါတယ်။
တဲ့တဲ့ပြောရရင် ဘယ်သူမဆို ကိုယ်ရေးတဲ့စာတွေ အရွေးခံရသည်ဖြစ်စေ၊မခံရသည်ဖြစ်စေ
စာရေးသူ(စာရေးဆရာလို့တော့အမည်တပ်ချင်မှတပ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်)တယောက်ဟာ “ရေးနေရရင်” ကြေနပ်ပါပြီ။
ပြောလိုတာက သူကြီးရဲ့ရွေးချယ်မှုဟာ စာရေးသူထက်စာဖတ်သူကိုရည်ရွယ်တာပါ။
ကျနော်တို့ “ပြန်ရချက် အပေါ်မျှော်လင့်ခြင်းကင်းသော” စာများကိုဆက်လက်ရေးသားပါအုန်းမယ်။
အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့် ရှင်းပြတဲ့ ကော်မန့်မျိုးကို အနှုတ်ပေးတဲ့လူဟာ
ဘာမဟုတ်တဲ့အသေးအဖွဲတွေပေါ်မှာ အကျယ်ချဲ့စဉ်းစားပြီး သူများကိုတိုက်ခိုက်
ဒီပို့စ်အတွက် ( ပေါ်ပြူလာ ) ဆိုတဲ့ စကားလုံးတစ်ခုကို ညွှန်းပါတယ်
စာရေးတာနဲ့တင် အားကုန်အားပြတ်နေရင်တော့ နင့်ဟာမလွယ်ဘူး မောင်ရှုံးရေ… ယောက်ျားကောင်း မောင်းမတထောင်တဲ့ ကြားဖူးလား… မနိုင်ရင် ဆေးသောက်ရတယ်၊ အားတော့ အပြတ်မခံနဲ့။
ဆာဒူးဂျီး ၊ မြင်္ဟသာ တို့ တော့ တီဗီမှာ ကြေငြာတာ ကြည့်ဖူးတာဘဲ
ဂဇက်မှာစာရေးသူတွေကတော့ အတွေ့အကြုံလေးတွေ၊ ကိုယ်ကျင်လည်ရာလေးတွေ၊ ကိုယ်ရဲ့တွေ့ရှိချက်လေးတွေ၊ ဗဟုသုတတွေ၊ ကိုယ့်ခံစားချက်လေးတွေကို မျှဝေပေးချင်လို့ စာရေးနေကြတာလို့ထင်ပါတယ်၊ ကွန်းမန့်ရခြင်းမရခြင်းနဲ့တော့ မတွက်လောက်ဘူးထင်ပါတယ်………
တစ်ခါတစ်လေလည်း ကွန်းမန့်ပေးချင်ပေမယ့် ကွန်နက်ရှင်ကြောင့် ၀င်မပေးဖြစ်တာတွေလည်း ရှိနိုင်တာပါပဲ…………..
သများကတော့ ဖတ်နေရရင် ပျော့်နေတာပါပဲ
ကျေးဇူးပြု၍ ပျော့်နေတာပါပဲ အစား ပျော်နေတာပါပဲ ဟု ပြင်ဆင်ဖတ်ရှုပေးပါရန်
စာရေးပြီဆိုမှတော့ ရင်ဘတ်နဲ့ခံစားပြီးမှ ရေးလို့ရမှာပါ … ဗဟုသုတပေးချင်ရင်တောင်မှ အရင်နားလည်အောင် ခံစားရပါသေးတယ် …
ဒီဆိုဒ်မှာက သုတ ရသ အစုံရေးကြပါတယ်။ ခေတ်ကာလအခြေအနေအရ လူအများစုက သုတပိုင်းနဲ့ နိုင်ငံရေးပိုင်းကို စိတ်ဝင်စားကြပါတယ်။ ခံစားမှုရသသီးသန့်ကို ခံစားနိုင်ဖို့အချိန်မရလောက်အောင် ဘ၀တစ်ခုအတွက် ရုန်းကန်နေကြရသူတွေအများစုရှိနေလို့ ရသစာပေကို ကွန်မန့်ပေးသူ နဲနေတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ် …
သူကြီးရဲ့စေတနာကလဲ နိုင်ငံအကျိုးပြုကို အဓိကထားတာမို့ အကျိုးရှိမယ်ထင်တဲ့ပို့စ်ကို အယ်ဒီတာ့ချိုက်ရွေးတာဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ်ရေးလိုက်တဲ့စာတိုင်းက ကိုယ်တိုင်မွေးလိုက်တဲ့သားသမီးလိုပဲ ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာတော့ အကောင်းဆုံး၊ အလှဆုံး၊ အတော်ဆုံးဖြစ်နေပေမယ့် အများအမြင်နဲ့ လွဲနေတာတွေ အများကြီးရှိတာကို နားလည်ပေးစေချင်ပါတယ်။
ကွန်မန့်ဆိုတာကလဲ ဘာမှပြောစရာမလိုအောင်ကောင်းမွန်ပြည့်စုံနေရင် ပေးစရာမလိုဘူးမဟုတ်လား … ကွန့်မန့်နဲလို့တော့ စိတ်မကောင်းမဖြစ်ပါနဲ့ … ရေးစရာရှိတာရေးပါလို့ အားပေးချင်ပါတယ် …
အပေါ်ကလူတွေပြောထားသလိုဆို editor’s choice ဆိုပြီး ရွေးထားတာ ရှိတယ်ပေါ့။ အဲလိုလား…
အခုတော့ တနေ့ တနေ့ တင်သမျှ ပိုစ်တွေ ဖတ်ဖို့တောင် အနိုင်နိုင် ဖြစ်လာတော့ ပိုစ်တင်ဖို့လည်း သိပ်စိတ်မကူးဖြစ်တော့ဘူး။
သူများ ရေးတာပဲ ဟိုမရောက် ဒီမရောက် ဖတ်နေတယ်။
ထို့အတွက်ကြောင့် စာတွေတော့ ရေးနိုင်ဦးမည်မထင်၊ ခံစားချက်တွေသာ စုဖြစ်နေတော့၏။
အဲဒီတော့ ကိုရှုံးရေ ကိုသစ်မင်းပြောသလိုပါဘဲ။
စာရေးသူ(စာရေးဆရာလို့တော့အမည်တပ်ချင်မှတပ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်)တယောက်ဟာ “ရေးနေရရင်” ကြေနပ်ပြါ
တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူ လေးတစ်ယောက် မြန်မာစာကပါ မြသန်းတင့် သိလားဆိုတော့
အင်းသိတယ် အတိုးပေးစားတဲ့ ကျွန်မအိမ်ဘေးကမိန်းမကြီး..တဲ့။ ဆရာမြသန်းတင့်ခဗျာ
ရင်ဘတ်နဲ့ စာရေးတာဟုတ်ပါစလေ။ ဆရာကြီးဇော်ဂျီ ရင်ဘတ်မပါဘူး ဒဂုန်တာရာ
ရင်နှင့်ရေးခဲ့လေသလား၊ ဖေါ်ဝေး သင်းကဗျာတွေ ဘယ်လို တပုဒ်ပြီးတပုဒ်ရေးခဲ့ သလဲ
မောင်ယဉ်မွန် ၊မောင်လေးအောင် ခံစားချက်ရှိရဲ့လား အောင်ဝေး ခင်ဗျား နာမည်ကြီးချင်လို့
ဆရာကြီးဂျက်(မောင်သာချို )၊ ချစ်ဦးညို ၊နေ၀င်းမြင့် ..မောင်စိန်ဝင်း(ပုတီးကုန်း) ရင်ဘတ်
နဲ့ စာရေးခဲ့တာလား…….။ခင်ဗျားတို့တွေ ရှိတာတွေထုတ်ပေးတာထပ်ဖြည့် ရမယ်မဟုတ်လား
ကမ်းဝေးကဗျာရေးတာ မဂ္ဂဇင်းမှာ ကြာပြီ ၊ထပ်ဖြည့်လေ..အပေါ်က ဆရာသစ်မင်းရေးတာပြည့်စုံ
တွေ စာပေလောကမှာမရှိ ၀ါသနာနှင့်စေတနာနှင့် မနေနိုင်၍ရေးကြပါသည်။
သစ္စာနီ၊တာရာမင်းဝေတို့သည်ကား ရင်ဘတ်ထဲ အားဘယ်လိုဖြည့်လေသည်မသိ။ဂျူး၊မိချမ်းဝေ.
ခက်မာ ၊မောင်ညိုမှုင်းတို့ ..အားပြတ်နေပြီထင်။
ဆရာအီကြာကွေး ၏လက်များသည် R.A (အဆစ်ရောင်ရောဂါ)လို ကွေးကောက်နေသည်။ဘာကြောင့်လဲဟု
မေးကြည့်ရာ စာရေးရလွန်းဟုသိရသည်။အော်ဆရာတို့ ရင်ဘတ်ဟောင်းလောင်းကြီးနှင့်ရေးခဲ့ ကြသည်လေ။ကျွန်ပ်ကလည်း မန္တလေးဂေဇက်ကို မဂ္ဂဇင်းတစ်စောင်ကဲ့သို့ မြတ်နိုးစွာသဘောထားပါ
၍ မဂ္ဂဇင်းပို့လျှင်ရသော်လည်း ဂေဇက်တွင်ပင် တင်ခဲ့ ..ခင်ခဲ့ပါကြောင်း၊ရင်ဘတ်နဲ့ ရေးနေပါကြောင်း
၀န်ခံဂတိပြုလိုက်ရပါသည်။ ကိုဘလက်ချောရေ ..ခင်ဗျားရင်ဘတ် ရှိရဲ့လားနော်….။
ကိုသစ်မင်းနဲ့တစ်ကွ ၀င်ရောက်ဆွေးနွေးကြသူတွေကို ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း။ ဒီ Post ကိုတင်လိုက်တာကလဲ ခံစားချက်သက်သက်သာဖြစ်ပြီး ဘယ်သူ့၊ ဘယ်သူကိုမှ ကောင်းတယ်၊ မကောင်းဘူးပြောချင်တာလဲ မဟုတ်ပါ။ Pooch ရေးထားတဲ့ အငုံစိတ်ဆိုတဲ့စာလေး တော်တော်ကောင်းပါတယ်။ အကြောင်းအရာ၊ အချက်အလက်ရောပေါ့။ နောက် ကိုသော်ဇင်(လွိုင်ကော်) တို့လိုလူတွေ ရေးထားတာ တော်တော်လေးကောင်းတယ် မြင်မိပါတယ်။ သူတို့တွေကိုလဲ အဲလိုရွေးချယ်ပြခံရတာမြင်ချင်မိတာသက်သက်ပါ။
ကျွန်တော်ချန်ချင်တဲ့ Message က ကျွန်တော်ခုတစ်လော စာမရေးဖြစ်သေးဘူးဆိုတာပါ ထည့်ရေးလိုက်တော့ တစ်မျိုး မြင်သွားကြလားမသိ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတော့ စိတ်ထဲရှိတာ ချရေးပြနေသူသက်သက်ထက် ပိုမတွေးပါဘူး။
ရေးပြီးကတည်းက ကွန်ပျူတာကို ခုမှ ဖွင့်ဖြစ်တာမို့ အကြောင်းပြန်တာ နောက်ကျတာကို အားလုံးပဲ နားလည်နိုင်ကြမယ်ထင်ကြောင်း။
ညီလေး ပြောတဲ့ လူတွေကို သတိထားဖတ်ပါ့မယ်
အကို အားနည်းချက် က အကုန်မဖတ်ပဲ ဖြစ်နေတယ်
ဒါကလည်းကွာ ဘ၀ပေးအခြေအနေအရ အချိန်လုရတာပါ
ဒီလို ပြန်ပြောတဲ့ ညီလေးကို လေးစားပါတယ်။
အကျွန်ုပ်လည်း စိတ်မပါသည်နှင့် တစ်လလောက်ရှိဘီ….။ ဘာမှဟုတ်တိပတ်တိမရေးဖြစ်သေး…………. ကိုရှုံးစာဖတ်မိတော့မှစာရေးဖို့ သတိရသွားတဲ့ အတွက်ကျေးဇူးပါပဲ…။
ကိုရှုံး ရေ – ကျွန်မ က သူများရေးထား တာတွေ ဖတ်ပြီးမှ ပိုပြီး အတွေးပေါ်တတ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် မှတ်ချက်ပေးရတာ ပိုအားသန်ပါတယ်။
အားလုံး ရဲ့ စာတွေကို ဖတ်ချင်ပါတယ်။ စာတိုင်း မှာလဲ လိုက် မှတ်ချက် ပေးချင်ပါတယ်။
ဒီတော့ တစ်ခါတစ်ခါ ရှေ့ဆုံးတွေ့တာတွေကို ဖတ်ရင်း မန့်ရင်း အချိန်ကုန်သွားရင် တစ်ချို့နေ့တွေမှာ တစ်ချို့ စာတွေ မဖတ်ဖြစ်တာရှိပါတယ်။
လူရွေး တာ မဟုတ်လောက်ကြပါဘူး။ ပြဿနာက အချိန်ဖြစ်မှာပါ။
ကျုပ်ကစာမူတွေတည်းဖြတ်.. စိစစ် (အဲဒီတုံးက စိစစ်ရေးတင်) လုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်ကစတွက်ရင်.. အနှစ်အစိတ်လောက်ရှိနေပါပြီ..။
စာပေကင်ပေတိုင်ရုံးက..စာမဖတ်ဖူးတဲ့.. စစ်သားကြီးတွေ.. ဟောက်ဆဲဆိုသမျှ.. ဟုတ်ကဲ့..ဟုတ်ကဲ့..လုပ်ခဲ့ရတာတွေလည်း ရှိခဲ့ဖူးသပေါ့..။
လက်ဆောင်ထုတ်ကလေးပေးပြီး.. ကိုယ်တင်တဲ့ စာမူ..၀တ္တုလွတ်အောင်လည်း လုပ်ခဲ့ဖူးသပေါ့..။
ငွေမှင်တွေသုတ်ခိုင်းလို့.. နေ့ည.. ထိုင်သုတ်တာလည်း လုပ်ခဲ့ဖူးပါတယ်..။
တင်လာသမျှ.. စာတွေရော.. မန်းတာတွေရော.. ရင်ဘတ်နဲ့ရေးကြတယ်ယူဆပြီး.. တလေးတစားဖတ်ပါတယ်..။
အနီပေးတာတောင်.. အနီပေးသူက.. ၁စက္ကန့်လောက်စိုက်ပေးလိုက်တဲ့ အချိန်အတွက်.. အလေးထားပေးပါတယ်..။
အခုမြင်နေရတဲ့..၀က်ဘ်ဆိုက်ပေါ်က.. ရွေးချယ်ဖြတ်တောက်စိစစ်နေတာတွေဟာ.. အတွေ့အကြုံရှိတဲ့.. အယ်ဒီတာတယောက်ရဲ့.. လုပ်ပိုင်ခွင့်ထဲကနေ.. လုပ်နေတာလို့ပဲ..မှတ်ထားပေးစေလိုပါတယ်…။
ကော်မန့်များများ ရချင်ရင်တော့.. စာဖတ်သူဖြစ်တဲ့..ကိုယ့်စာကို.. မန်းလာသူတွေတဦးချင်းကို.. ကိုယ့်စာဖတ်ပရိတ်သတ်လို့.. သဘောထားပြိး.. ပြန်လှန်ေ၇းသားဆွေးနွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်..။
– စာမူရှင်သည် မိမိစာအပေါ်ကော်မန့်ပေးသူများအား ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူဖြစ်ရမည်။
ပုံနှိပ်ဖေါ်ပြဖို့ ရွေးတာမှာ.. ၀က်ဘ်ဆိုက်နဲ့.. ပုံနှိပ်.. စာမူတွေခွဲခြားပြီးလည်း လုပ်နေပါတယ်..။
အယ်ဒီတာချွိုက်စ်ဆိုတာ.. စတစ်ကီလုပ်လိုက်တာကို ..ဆိုလိုကြတာဖြစ်ပြီး… ဒီနေ့မှာမှ .Sticky Post တွေကို… . Category > Mandalay Gazette > Editor’s Choice .. အောက်မှာ.. ထည့်လိုက်ပါကြောင်းနဲ့.. အဲဒါနဲ့.. နှစ်ကုန်မှာ.. “ဆု” ရွေးချယ်မယ်ဖြစ်ပါကြောင်းပါနော…။
ရှုံးနိမ့်မှုများနဲ့လူ..ပြောသွားတဲ့ထဲမှာ ကျွန်တော့်နာမည်လည်းပါနေတော့ ၀မ်းသာရပါတယ် ။ ဒီထက် ၀မ်းသာရတာက
ကျွန်တော့် ကို..၇င်ဘတ်နဲ့စာရေးသူများ စာရင်းမှာ ထည့်ထားတာကိုပါ။
ဟုတ်ပါတယ် ။ ကျွန်တော်ကလည်း…အဲဒီလိုပါပြဲဖစ်နေတာပါ ။ ခံစားချက် တစ်ခု ပြင်းထန်လာမှ စာ ရေးဖြစ်တယ် ။ ရေးတာလည်း အလွန်ကျဲ..ပါတယ် ။
ခံစားချက်တစ်ခု..ပြောပြချင်တာလေးတစ်ခုခုရှိလာရင်တော့ အဲဒီ စာကို တစ်ထိုင်တည်းနဲ့ အကြမ်းရေးချပြီး..နောက်မှ.(.နောက်အတော်ကြာမှ) အချောပြန် ရေးတယ်။ ။မလိုအပ်တာတွေ..စာဖတ်သူအနေနဲ့ မသိသင့်ဘူးထင်တာတွေကို ပြန် ခြစ်ထုတ်လိုက်ပါတယ် ။
အဲဒီလိုရေးတာကြောင့်လည်း တစ်ပုဒ်ရဖို့ အတော်ကြာပါတယ် ။
ကျွန်တော် …က ကိုယ် ဘာသာ ကိုယ် ထင်နေတာလည်း..အဲဒီလိုရင်ဘတ်နဲ့ရေးသူ…လို့ ပါပဲ။
အခုလို သတိတရ သတ်မှတ် ပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ရပါတယ် ။
ဆ၇ာသစ်မင်းပြောသွားတဲ့ စကားလေးကိုလည်းကြိုက်ပါတယ် ။
ကျွန်တော်တို့ ရေးလိုက်တဲ့စာအတွက် ကျွန်တော်တို့ ဘာကိုပြန်ရဖို့မျှော်လင့်သလဲ…
ကျွန်တော်တော့ ဘာကိုမှ မမျှော်လင့်မိပါဘူး။
ခံစာချက်တစ်ခုကို ခံစား၇တဲ့အချိန်မှာရေးပြိး အဆင်သင့်တဲ့အချိန်မှာ တင်ပြလိုက်တယ် ။ အဆင်သင့်တဲ့ သူတွေ..ဖတ်မိသွားမယ် ။
အဆင်သင့်ရင်..သူတို့..ကျေနပ်မယ် ။အဆင်မသင့်ရင်တော့ ခေါင်းခါခါ လည်ခါခါ နဲ့ စွန့်လွတ်ထားခဲ့ပါလိမ့်မယ် ။
ကျွန်တော်တို့ အလုပ်ကတော့ ပြောပြချင်တာလေးတွေ….ခံစားချက်တွေကို ဆက်ရေးနေဖို့ ပါ ။
ဆ၇ာသစ်မင်းနဲ့…ရှုံးနိမ့်မှများနဲ့လူ..ကို အထုး လေးစားခင်မင်ရပါတယ် ။
ရူံးလူရေ..အားမကုန်ပါနဲ့ကွာ..အားကုန်ရင် ပျားအုံစားပါ…အကိုတို့ခေတ်က ကြော်ညာပါ…
ဖတ်တဲ့သူကတော့ ရင်ပက်ကြီးနဲ့ဘယ်ဖတ်ပါ့မလဲကွယ်…ရေးတဲ့သူကပဲ ရင်ပက်ကြီးနဲ့ရေးမှာပေါ့…